नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): बाबुराम कमरेड यदी तपाईंसँग नैतिकता भन्ने कुराको मात्र न सम्म छ भने प्रधानमन्त्रीबाट तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्ने होइन र भन्या !?
बाबुराम कमरेड यदी तपाईंसँग नैतिकता भन्ने कुराको मात्र न सम्म छ भने प्रधानमन्त्रीबाट तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्ने होइन र भन्या !?
तपाईं र तपाईंका मन्त्रीले गरेका हरेक काम अबैध भन्दै सर्बोच्च अदालत ले कती पटक रोक्यो हिसाब राक्नुभा छ महासय ??
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता बाड्न गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ । बादी र प्रतिवादीसँगको छलफलपछि न्यायाधीशद्धय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको सयुक्त इजलासले मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले जन्मका आधार २०६४ सालमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई अब वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन
दिएको थियो । ४६ सालअघि नेपालमा जन्मिएका करिव १ लाख ७२ हजारले दोस्रो जनआन्दोलनपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहको परिपत्र अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन विवपरित भएको दावी गर्दै अधिबक्ताहरु श्रीप्रकास पण्डित, बालकृष्ण न्यौपाने र बबिता वस्तीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
Posted by www.Nepalmother.com at 2:26 PM